Archive du 20190607
Tabera Randriamanantsoa « Fotaka iny fifidianana iny »
Tsy mbola nahita fifidianana fotaka toy iny depiote iny aho, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanantsoa, raha nilaza ny heviny voalohany indray taorian’ny fitetezam-paritra nataony.
Fifanolanana momba ny fifidianana Fitoriana 41 no voarain`ny HCC
Nanomboka ny 28 mey ka hatramin`ny omaly, mahatratra 41 ireo fitoriana voarain’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ka saika avy amina faritra maro manerana ny nosy no nahazoana izany.
Fifidianana solombavambahoaka Nahazo ny maro an’isa tsy azo hozongozonina ny IRD
Manodidina ny 30% ny salam-pahavitrihan’ny mpifidy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka notanterahina ny 27 mey lasa teo. Araka ny vokatra vonjimaika navoakan’ny Radiom-pirenena Malagasy
Marine Le Pen sy ny antoko RN Mampiaka-peo momba ny “Îles Eparses”
Nampiaka-peo ny Antoko RN (Rassemblement National) tarihin-dRamatoa Marine Le Pen any Frantsa, manoloana ny raharaha « îles Eparses » anisan’ny votoatin-dresak’i Andry Rajoelina sy Emmanuel Macron tany Paris ny 29 mey lasa teo.
Faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantena Hiavaka ny fankalazana
Nampahafantarin’ireo Vaomieran’ny “Civisme” omaly tetsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina ny fizotry ny fankalazana ny fetim-pirenena amin’ity faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantena ity.
Fihinanam-be eny Iavoloha Nofoanana mba hakana fom-bahoaka
Hiova endrika ny lanonana ara-panjakana eny Mahamasina hanamarihana ny faha-59 taona nahazoan’i Madagasikara fahaleovantena sy ny fetin’ny foloalindahy ny 26 jona izao.
Fikambanana Rantsana dimy « Nahazo baiko avy any an-danitra »
Nanao fanambarana tetsy amin’ny CNEAGR Nanisana omaly ny avy eo anivon’ny fikambanana Rantsana 5 fa nahazo baiko avy any an-danitra izy ireo mba hiantso ireo mpitondra fivavahana
OTIV Madagascar Tsy maintsy mitady vahaolana anio
Nisy fihaonana nataon`ireo tompon’andraikitry ny OTIV manerana ny nosy sy ny filoha Rajoelina, ny talata lasa teo, manoloana ny fahalanian`ny vola sy tsy fandovam-bola voalaza ho nataon`ny teo anivon`ny OTIV.
Tanora nifanafika Sakoroka be teny Faravohitra
Sakoroka sy savorovoro no niseho teny Faravohitra akaikin'ny lisea tao anatin'ny firavan'ny mpianatry ny lisea omaly hariva, raha ny vaovao niparitaka.
International Tourism Fair Madagascar 2019 Mpisehatra ara-pizahantany 300 no handray anjara
Hotontosaina eny amin’ny CCI Ivato amin’ny 13 hatramin’ny 16 jona ho avy izao indray ny hetsika International Tourism Fair Madagascar andiany fahavalo.
Fifandraisan-davitra Hisy fihatsarana hatramin`ny 2021
Hisy fihatsarana ho an`ny 3 taona manaraka, raha ny tombana navoakan`ny Ways Guy Reports na eo amin`ny kalitao na eo amin`ny vidiny amin`ny sehatry ny fifandraisana.
Basikety - Tompondaka N1 B 2019 Hangotraka ny ampahefa-dalana anio zoma
Hangotraka ireo lalao ampahefa-dalana amin’ny fifaninanana basikety fiadiana ny ho tompondakan’ny sokajy N1 B 2019 anio zoma 07 jona any Tsiroanomandidy :
Kolontsaina sy vakoka Hofanina ireo mpiandraikitra mozea
Manaraka fiofanana mandritra ny roa herinandro amin’izao fotoana ireo tompon’andraikitra sy mpiasa eo anivon’ireo tranombakoka na mozea eto Madagasikara.
Iray volan’ny teny Malagasy Olona 50 no nandray anjara tamin’ny fifaninanana kabary
Hankalazaina amin’ity volana jona ity ny iray volan’ny teny Malagasy. Tsy diso anjara amin’izany ny fikambanana Ny Andraina izay miezaka manome lanja ny soatoavina Malagasy eto amintsika.
Mitonantonana, hoy ny voambolan’ireo mpanao politika sasany sy ny mpanara-baovao eto Madagasikara,
Fifandraisan’i Macron sy Trump Manga ny lanitra
Miavaka ary hafa mihitsy ny fifandraisako amin’ny filoha Emmanuel Macron, hoy ny filoha Amerikanina Donald Trump omaly tany Caen teo nandritra ny fifampiresahan’ny roa tonta tamin’ny mpanao gazety.
SOUDAN Nolavin`ny lehiben`ny mpanohitra ny fifampiresahana
Nanda ny fifanakalozan-kevitra naroson’ny tafika ny lehiben`ny mpanohitra Sodaney taorian’ny herisetra mahatsiravina nataon’ny miaramila ny alatsinainy teo tamin’ireo mpanohitra.
Fifidianana parlemantera any Danemark Nanaiky ny fahareseny ny praiminisitra Lokke Rasmussen
"Tsara ny fifidianana nataontsika saingy nisy indro kely", hoy ny praiminisitra Lars Løkke Rasmussen,
Fiarahamonina Voailika ireo ankizy mivadi-tongotra
Ny fikambanana Miracle feet sy ireo mpiara-miombon’antoka tahaka ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny Fondation Telma no nifandrimbona tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny mivadi-tongotra tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy.
Tsipoapoaka Voarara ny fivarotana sy ny fampiasana azy
Efa mizotra miandalana mankany amin’ny fankalazana ny tsingerin-taona faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantena isika eto Madagasikara ankehitriny.
PRIMA BABY 10 taona Hanampy ny ray aman-dreny amin’ny fitaizana ny ankizy
Feno folo taona katroka amin’ity taona 2019 ity ny Prima baby.
Mausolé Mpanendaka tratra teo am-pisintomana pôketrana vehivavy
Lehilahy mpanendaka iray no voasambotry ny pôlisy teny Mausolé ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 05 ora maraina rehefa avy nanendaka vehivavy roa nikasa handray taxibe teny an-toerana.
Turkish Airlines Cargo «Tsy mitombina fa saika nipoaka ny fiaramanidina Airbus 330»
Araka ny vaovao nampintain’ny tompon’andraikitry ny kaompaniam-pitaterana Turkish Airlines Cargo, tsy nisy fipoahana ny zotra ana habakabaka ny alahady heriny tamin’ny 10 ora latsaka fahefany atoandro teo, teny Ivato.